‘साउन ३ गते ठूलो षड्यन्त्र हुनेवाला थियो, २२ जनालाई सलाम छ’ | Ratopati
श्री ५ महाराजले आममाफी दिए, हामी गद्‌गद् भयौँ !
personमाधवकुमार नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ८, २०७८ chat_bubble_outline0
आजको कार्यक्रममा उभिएर बोल्दा मलाई एक वर्ष पहिलेको सम्झना भइरहेको छ । पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यही भवन (तुल्सीलाल स्मृति भवन) को तल्लो तलामा पुष्पलाल मिलन केन्द्रले यस्तै कार्यक्रम गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र एउटा ठूलो संकट आएको थियो । पार्टीभित्र संकटको प्रभाव नेतृत्व तहमा देखिएको थियो । त्यसको सिर्जनाकर्ता कमरेड केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पार्टीको निर्णयलाई, व्यवस्थालाई, पार्टीको विधि पद्धतिलाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै जाने काम गर्नुभएको थियो । आज त्यो अवस्था पनि सम्झिरहेको छु ।
संकटै संकटबाट गुज्रिरहेको यो कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । मान्छेको जीवनमा चुनौती आएजस्तै आन्दोलनको जीवनमा, पार्टीको जीवनमा पनि चुनौती आउने गर्छ । चुनौती, संकटहरु आए भनेर त्यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कुरा छैन । एउटा गीत छ, जीवन संघर्ष हो, संघर्षबाट भागेर मर्छु नभन । त्यसको डटेर मुकाविला गर्ने आँट गर । यो त्यतिकै भनिएको हैन । मैदान छोडेर भाग्ने हैन ।
धर्मेन्द्र बास्तोलाजी (विप्लव समूहका नेता) मा अझै उग्र वामपन्थी धङधङी बाँकी रहेछ । बन्दुक उठाएर सबैथोक गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएको रहेछ । नेपाली समाजमा त्यसको उपादेयता के छ ? जनताको मन जित्ने काम गर्नुस् । हाम्रो दायित्व के हो ? जनता । अहिले जनताको हालत के छ ? महिलाहरु बलात्कृत छन्, महिलाहरूमाथि हिंसा, हत्या हुने गरेको छ । अपहरण गरिन्छ, बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, दलित भनेर भेदभाव गरिन्छ ।
नेकपा एमालेभित्रको पछिल्लो संकट किन भयो, थाहा छ ? हिजो श्री ५ महाराजधिराजको अभिव्यक्ति आयो, माधव नेपाललगायत माननीय सदस्यहरूमाथि जति पनि स्पष्टीकरण गरिएको छ, त्यसलाई आममाफी दिइन्छ । एमनेस्टी इज ग्रान्टेड ! हामी कति गद्‌गद् भयौँ ! महाराजधिराजले आम माफी दिनुभयो हामी त खुसीले गद्‌गद् भयौँ । हामीलाई त आम माफी मिले छ ! हामी त खुसीले उफ्रिनुपर्ने भो ! यही हो प्रवृत्ति ? यसैलाई भनिन्छ कम्युनिष्ट प्रवृति ?
स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले त्यो हतार गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, स्पष्टीकरण फिर्ता लिएको छु भन्दा के हाइट घट्थ्यो ? मर्यादा कम हुन्थ्यो ? प्रवृति उस्तै छ ।
म त मान्छे सुध्रन्छन् कि भन्छु । आज सुध्रेलान् कि भन्या छ, भोलि सुध्रेलान् कि भन्या छ, केही पनि नबोलेर मैले हिजो मिठो मिठो शब्द मात्र निकालेँ । हिजो चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति दिवसका दिन बोल्दा पनि जिब्रो चिप्लेला कि भनेर बोलेँ । पार्टी एकतामा असर पर्ने कुरा आउला कि भनेर छेउमा बसेर साथी इशारा गरिरहनुभएको छ । कमरेड ख्याल गरेर बोल्नु भन्या छ । ख्याल गरेर बोलिरहेको छु । हाड नभएको जिब्रोले बोलिदिइहाल्ला कि भन्ने कत्रो त्राहिमाम !
अस्ति साउन ३ गते ठूलो षड्यन्त्र हुनेवाला थियो । यत्रो हुँदाखाँदाको संसद पटक–पटक विघटन गरियो । यो नेपालको इतिहासमा त अनुपम छँदैछ, संसारको इतिहासमा पनि विरलै पाइन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई एकपटक सिध्याएको छ, सकेन फेरि सिध्याएको छ । त्यो ब्युँतिदाखेरि त्यसको नैतिक दायित्व बोक्दा पनि बोक्दैनन् । अनि पुस ५ गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि साउन ३ गते फेरि गंभीर षड्यन्त्र भएको थियो । जसरी पनि शेरबहादुर देउवाको सरकारले विश्वासको मत नपाओस् । नपाइसकेपछि मैले गरेका विघटनहरु ठीक थिए । दुरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डंका बजाउने उहाँको सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ । संसदलाई जोगाइदिएका छौँ । व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ । संविधानको रक्षा गरेका छौँ । कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ । न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ ।
हामीले सबै जायज काम गरेका छौँ । संविधानसम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरवबोध छ । म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका झलनाथ खनालसहित ती २२ जना सदस्यहरुलाई म सलाम गर्न चाहन्छु । अनि बाँकी ती ११ जनालाई पनि म सलाम गर्छु, जसले विपक्षमा भोट खसाल्नुभएन ।
(पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
माधवकुमार नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता हुन् ।